यी आजका स्मार्टफोनका लागि अमेजन प्रस्तावहरू हुन् Androidsis
जब हामी अमेजन जस्ता साइटमा जान्छौं, हामीले सोच्ने पहिलो चीज केहि खरीद गर्दै छ, हैन? र दोस्रो, हामीलाई केहि पैसा बचत गर्नु छ, हैन? ठिक छ, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, र तपाईं स्मार्टफोनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंको आवश्यकताहरू मिल्छ, त्यसो भए स्वागत छ! तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ।
यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई आजको लागि के प्रस्तावहरू बताउनेछौं जुन आज ०००:०० घण्टा देखि, डिसेम्बर १ 00 सम्म, स्पेनमा २ 00: Spain hours घण्टा सम्म उत्तम टर्मिनलमा रहनेछ। त्यसोभए तपाईले अमेजनले छुट पाउनु भएको छुटको फाइदा लिनुहोस्, त्यसैले किनमेल गर्न जाकेटमा जाकेट गर्नुहोस्। तयार हुनुहुन्छ?
1 यी आजका लागि स्मार्टफोनमा अमेजन प्रस्तावहरू छन्
1.1 ASUS ZenFone २ लेजर ZE2KL केवल १ 601 यूरोको सट्टा १ 169 199 यूरो
1.2 १c। .3eको सट्टा १149eमात्रको लागि एल्काटेल ए। एक्सएल
1.3 Alcatel A3 यसको सामान्य मूल्य को १109। .159.99eको सट्टामा मात्र १०eको लागि
1.4 Alcatel SM03-WH यसको अघिल्लो मूल्य को 44 ur को सट्टा मात्र 89 XNUMX यूरो को लागी
1.5 सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J7 (२०१ 2017) यसको आधिकारिक मूल्यको 239 339। यूरोको सट्टा २ XNUMXeमात्रको लागि
2 December१ डिसेम्बर सम्म स्मार्टफोनमा अनमोल प्रस्तावहरू
2.1 मोटो जी 5th औं जेनरेशन यसको आधार मूल्य को १ 149 199 यूरोको सट्टा १ XNUMXeमात्रको लागि
ASUS ZenFone २ लेजर ZE2KL केवल १ 601 यूरोको सट्टा १ 169 199 यूरो
यो दिनमा, तपाईं यो मध्य-दायरा टर्मिनल एक अविश्वसनीय-इन्च HD स्क्रिन, GB जीबी र्याम र १6जीबी भण्डारण स्पेसको साथ धेरै कम मूल्यमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।, र तपाइँको spend० बहुमूल्य यूरो अरू केहि खर्च गर्न बचत गर्नुहोस्। यो प्रस्ताव समाप्त हुनु अघि यसलाई किन्नको लागि दौडिनुहोस्!
१c। .3eको सट्टा १149eमात्रको लागि एल्काटेल ए। एक्सएल
यदि तपाई 30० भन्दा बढि युरो बचाउन खोज्नु भएको छ, र तपाईको जेबले बढी दिईंदैन भने आराम गर्नुहोस्! तपाईं अल्काटेल ए X एक्सएल3इन्चको स्क्रिनको साथ पाउन सक्नुहुनेछ, कुनै छुट र अधिक केही पनि होइन, less०.6 युरो.
Alcatel A3 यसको सामान्य मूल्य को १109। .159.99eको सट्टामा मात्र १०eको लागि
जब यो बचतको कुरा आउँछ, अल्काटेल यसको छुट फोनहरूसँग आउँछ र हामीलाई बचत गर्दछ।
यस पटक 30०% भन्दा बढि छुटको साथ, अल्काटेल ए3१०० यूरोको एकजुटता मूल्यको साथ अवस्थित छ। -इन्च स्क्रीन द्वारा। कुनै चीज, कुनै श doubt्का बिना, लगभग सबैको लागि उपलब्ध छ।
Alcatel SM03-WH यसको अघिल्लो मूल्य को 44 ur को सट्टा मात्र 89 XNUMX यूरो को लागी
यदि तपाईंसँग अझै स्मार्टसच छैन भने, यो तपाईंको मौका हो! केवल 49 very धेरै सस्तो यूरो को लागी, तपाईं यस स्मार्ट घडी किन्न सक्नुहुनेछ तपाईंको ब्लुटुथ जडान र पानी प्रतिरोधको साथ दिनहुँ सामना गर्न। को फाइदा लिनुहोस्!
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J7 (२०१ 2017) यसको आधिकारिक मूल्यको 239 339। यूरोको सट्टा २ XNUMXeमात्रको लागि
दक्षिण कोरियाली कम्पनीको एक सबैभन्दा प्रख्यात र प्रसिद्ध मोबाईल हो जुन स्मार्टफोन बजारमा पुग्छ, मध्य-दायरा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J7 (२०१ 2017) १०० यूरोको छुटमा छ. केहि नगण्य छैन, ए?
त्यसोभए यदि तपाईं यो शक्तिशाली स्मार्टफोन buy..5.5 इन्चको फुलएचडी स्क्रिन र १.1.6 गीगाहर्ट्ज आठ कोर प्रोसेसरको साथ किन्न चाहनुहुन्छ भने, प्रस्ताव आज ११::23 p बिहान समाप्त हुन्छ।.
December१ डिसेम्बर सम्म स्मार्टफोनमा अनमोल प्रस्तावहरू
मोटो जी 5th औं जेनरेशन यसको आधार मूल्य को १ 149 199 यूरोको सट्टा १ XNUMXeमात्रको लागि
तपाईं उसलाई भन्न सक्नुहुन्छ नमस्कार, मोटो अमेजनमा मोटो जी 5th औं पीढीको लागि, र तपाईंलाई एक राम्रो e० यूरो बचत गर्नुहोस् १.1.4 गीगाहर्ट्ज अक्टा-कोर प्रोसेसरको साथ मोबाइलको लागि। तर यो प्रस्ताव यस वर्षको डिसेम्बर on१ मा ११::31 p बिहान समाप्त हुनु अघि फाइदा लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » यी आजका लागि स्मार्टफोनमा अमेजन प्रस्तावहरू छन्
नयाँ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A8 + का स्पेसिफिकेसनहरू फिल्टर गरिएका छन्